अष्ट्रेलिया विशेषः के अध्यागमन मन्त्रीलाई सिधै चिठ्ठी लेखेर म भिसा माग्न सक्छु ?
१। अध्यागमन विभागले गरेको निर्णय ट्राइब्युनलले पुनर्विचार गर्न मिल्ने अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएमा,
२। ट्राइब्युनलले तपाईंको केस पुनर्विचारको लागि अध्यागमन विभागमै फिर्ता पठाइदिएमा,
३। ट्राइब्युनलमा दर्ता गरिएको आवेदन वैध नभएमा वा निर्धारित समयसीमाभित्र दर्ता भएको नभेटिएमा, आदि ।
कस्तो अवस्थामा अध्यागमन मन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गर्दछ
अध्यागमन मन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्नको लागि उक्त केस ‘विशेष वा असाधारण परिस्थितिजन्य’ हुनुपर्दछ । त्यसका केही उदाहरणहरू तल दिइएका छन्
१. बाल अधिकार वा वालहितसँग सम्बद्ध केसः अस्ट्रेलियाले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसैले बालवालिकाको अधिकार, हित र संरक्षणसँग सम्बन्धित विषयलाई उसले गम्भीरताका साथ लिने गर्दछ । तपाईंले अस्ट्रेलिया छाड्दा किन बालवालिकाको अहित हुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईंले प्रष्ट्याउन सक्नुपर्दछ । बच्चाको मेडिकल रिपोर्ट, तपाईंको वैधानिक घोषणा -Statutory declaration_ आदिलाई प्रमाणको रूपमा पेश गर्न सकिन्छ ।
यस स्तम्भमा दिइएका जानकारी पूर्ण, अद्यावधिक र सबैका लागि उपयुक्त नहुनसक्छन्। कुनै निष्कर्षमा पुग्नु वा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुभन्दा पहिले अध्यागमन विभागको वेबसाइट, माइग्रेशनसम्बन्धी परामर्श दिने वकील वा रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेन्टबाट आवश्यक जानकारी लिनु उचित हुन्छ। लेखक रजिष्टर्ड माइग्रेशन एजेन्ट (MARN 1172267) हुन्। तपाईंका पनि कुनै जिज्ञासा छन् भने info@nepalipatra.com.au मा पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ। ९सम्पादक